8 Maaris ka dabogee .. – Maandoon
March 9, 2018 Maxamed Cabdilaahi 0 Comment
Hadii lagu yidhaahdo dumarka waxa liidday diinta islaamka oo waxa u daliil ah xadiis hebel ama aayad heblaayo waxa aad ogaataa in diin kasta iyo xadaarad kasta iyo dhaqan walba ay ka buuxaan odhaahyo ah hal-ku-dhag , murti ama maahmaah oo liidaya haweenka oo ay ka siman yihiin basharka oo dhammi ! waxa kale oo aad ogaataa in murtiyahaasi hore hadda uun ay noqdeen liidid ee markii ay baxayeen ay ahaayeen run iyo waaya-aragnimo !
Marka gunta la baadho ma jiraan dhaqammo kala duwan ee waxa jira hal dhaqan oo jirrid ah oo ay ka farcameen laamo badan ; waxa jira dhaqan-aadane (human culture) oo kala noocoobay duruufta deegaan awgeed (تنوع ثقافة واحدة-diversity of one human culture) ! dhaqankaa aadane ayaa ay ku sal leeyihiin arrimo badan oo aan maanta isku tuurtuurno oo uu ka mid yahay dulmiga dumarku .
Dhaqamada dhalanka ah ee ku aasan nafsadda nooleha oo dhan waa loollan ku aaddan khayraadka/quudka ; noole kasta waxa uu neceb yahay oo colaadiyaa ciddii kula loolanta quudka , waxaanu jeclaadaa oo uu xigteystaa cidda ku kaalmeysa loollanka nolosha iyada oo tixgalinta uu ciddaa u hayaa ku xidhan inta ay leeg tahay ama heerka ay joogto kaalmada ay siinaysaa !
Haddii aan ka bilowno waagii uu basharku ahaa badowga bilaa xirfadda ah waxa uu badanka ku noolaa ugaadhsiga iyo midheysiga ; ma uu aqoonin xirfadaha horumarsan ee ugaadhsi sida dabasho ama toogasho e waxa kaliya uu yaqaanay eryasho ! ragga oo leh muruqyo waaweyn oo u badan kuwa tamar dheeri ah kaydsan kara (myoglobin) isla markaana ka xiiqid yar dumarka ayaa uga karaan adkaaday dumarka hawshan ka dibna waxa lagu qaybiyay dumarka in ay kariyaan oo ay diyaariyaan ugaadhii la soo dilay ;waana halka ay salka ku leedahay in dumarku guryaha ka shaqeeyaan ! ogobey shaqadan dumarku la qiimo ma ahayn midda ragga sidaa awgeed ayaa doorka ay noloshaa kaga jireen ka hoos maray midda uu ninku kaga jiray !
Waxa la mid ah dagaalka gacanta ee qofku la galayo cadowga loollanka ku la jira oo dugaag iyo dadba leh taasi oo isla dhismaha jidheed iyo hoormoonadu (aggressive androgen) ninka siiyeen karti dheer haweenayda ; halkaana waxa ka dhashay hoos u eegid ku sidkan kaalinta ay haweenaydu ku jirto !
Dadka maanka ka dhiman , dadka naafada ah , fuleyda , doqmaha , kuwa aadka u liciifka ah iyo bukaanka waxa ay hoos-u-eegidda ku muteysteen kaalinta ay nolosha kaga jiraan darteed haddii kale cidna isma liiddeen la isumana abla-ableeyeen naaneysaha sida fariid , geesi , nacas iwm ! isla is barbardhiggaa hawleed ayaa uu ina rag ku liiday xaawaleyda !
Haddii raggu uu ugaadh soo qabsado karsanna karo isaga oo aan u baahan haweenay u karisa waxa jira waxa aanu uga maarmi karin oo dumarku ku leeyihiin door aan laga fursan karin ; waa xidhiidhka galmo sidaa darteed ayaa kaalintani ay noqotay meelaha ugu muhiimsan ee ay dumarku maamuuska iyo amaanta kaga heleen ragga heer bulshooyinka ugu quudhsiga badan dumarka sida soomaalidii iyo carabtii hore laga soo helayo amaan iyo qiimeyn badan marka ay arrintu jinsi la xidhiidho (jacayl jinsi) !
Duruufta deegaanku qofka waxa ay ku qasabtaa hab-dhaqan , hab-dhaqankaa ayaa uu nafsad ahaan iska dhaadhiciyaa in uu wanaagsan yahay si uu isu ilowsiiyo xumaanta QASABKA ! ka dibna waxa uu noqdaa DHAQAN kaasi oo jiilalku isku gudbiyaan isaga oo isla duruuftu qorqorayso se saameyntii asalkiisu jiidanayso (evolution of culture) ! sidaa awgeed ayaa qof beeroole ah oo xaaskiisu beerta la fasho uu ku quudhsadaa quudhsigii awowgiisii boqolaad ee waraabaha eryan jiray ; awowgii waxa uu ku quudhsaday haweenayda in ay waraabaha markeeda so qaban wayday halka uu beerooluhu ku quudhsanayo wacyi u soo gudbay awgii (laga yaabaa in ay u xoojinayso shaqada beerta oo uu xogaa uga karti badan yahay) ! waana isla sababta uu wadaadka sucuudiga ahi u quudhsado kartida dirawalinta ee dumarka waayo awowgiisii boqolaal sano ka hor noolaa ayaa dumarka ku yasi jiray in aanay heenseysan karin sange ama faras oo hawdaj (rako) u saari jiray awr !
Caqliga faaqida ee wax kala shaandheeya (critical thinking) waa midka wax kasta si balaadhan u macneeya ee macne kasta raadguri kara halka uu taariikh iyo deegaan ahaan ka soo galay maanka dadka ka dibna arka is badalka duruufta waqtiga iyo deegaanka iyo waxyaabaha buuxiyay boosaskii hore !
Mid soomaali ah ayaa igu yidhi “gabadh madaxweyne ma noqon karto waayo ciidan ma hogaamin karto oo dagaal ma gali karto ” ! in kasta oo ay gabadh tabobaran hadda ku dagaalami karto qori meel fog laga soo rido se waxa runtiisa ah in ayna badanka seef muruq gacmeed lagu qaadayo aanay kula dagaalami karin nin kartideeda oo kale leh hadii ay karti dagaal taqaanno ! waxa se isweydiin leh doodda ninkaasi ma sax baa ?! waa maya waayo waxa ay ku timid sawirashada maankiisa ee la nool garaad Wiilwaal oo isaga oo madaxweyne ah inta uu seef qaato guluf hogaamin jiray ! haddii kale dunidan maanta ma jiro madaxweyne dagaal galaa ; xataa badankoodu maba tabobarna oo ma gali karaan dagaal ! waa suaal ku timid wacyi-dhaxaleed waayadii hore ka soo gudbay !
Nusuusta diiniga ah iyo murtiyaha la dhaxlayba waxa ay ka hadlaan duruufta la nool yahay waxaanay ku hadlaan afka duruuftaa nololeed sameysay sidaa awgeed ka fursan mayso in duruufta goorogoobeed la la akhriyo laguna akhriyo ka dibna macneyaal habboon looga raadiyo goorogoobta la joogo ! tusaale ahaan xadiiska sheegaya “in aan hoggaan dumar libin lagu gaadhin” waa run marka dib loo celiyo taariikhda ee bariga dhexe la tago kun iyo badh sano ka hor ! waa sax hadii uu nabigu yidhi , haddii uu abu Jahal odhan lahaana sax uun baa ay ahaan lahayd waayo waaqica ayaa sidaa ahaa ! maanta se ma sax baa ?! waa maya waayo waaqica ayaa aan sidii ahayn ! wax badan oo kalena uga tusaale qaado .
Hadii nusuuta diinta islaamka oo qur’aanku ugu horreeyo ay ku timid erayo kala duwan oo keenay in siyaabo kala duwan loo akhriyo (qiraa’ooyin) suurogal ma aha in hal macne oo qudha lagu koobo e macneyaal badan ayaa ay nusuutu yeelan kartaa , midka ku habboonna dadka ayaa siiya oo qur’aanka rag baa ka hadliya (القرآن يستنطقه الرجال) sida Cali Bin abi Daalib laga soo xigtay ! macneha ku habboonna waa in maanka oo soo jeedaa ku fiiriya goorogoobta la joogo !
← Caafimaadka Maskaxda iyo Caqliga Madaxda!
Madiiddo Diimeedka Sucuudiga ! →
August 23, 2017 Abdalla Aw Hassan 0
Muxuu ahaa magacii nebiga loogu walqalay?
August 25, 2018 Cabdi Ismaaciil Comments Off on Muxuu ahaa magacii nebiga loogu walqalay?